I-Kefta tagine | Ukupheka Kwekhishi
I-Los ama-tajines zingenye zezitsha ezaziwa kakhulu zokudla kwaseMoroccan futhi phakathi kwazo zivelele ithegi yenkukhu yelamula, the ithegi yenkomo noma yemvu enama-plums nama-alimondi ekugcineni i i-kefta tagine. Lesi sakamuva yiso esiphekwa kakhulu ekhaya kanti ezinye ezimbili zigcinelwe imikhosi efana nemishado, lapha (iholide eligujwa ngosuku lwesikhombisa lokuzalwa kwengane), njll. Namuhla ku Ukupheka Kwekhishi sizolungisa a i-kefta tagine:
Isikhathi Sokulungiselela: Imizuzu engama-20 cishe.
Isigamu sekhilogremu inyama egayiwe (ngesiMoroccan kefta, yingakho igama le-tajine)
1 anyanisi (Ngisebenzisa 2 ngoba bebancane)
3 clove kagalikhi
1 isipuni se ikhumini
1 isipuni se upelepele
1 isipuni se pepper
2 noma 3 wezipuni amafutha e-olive
Isigejane se iparsley ne-coriander entsha oqoshiwe (uma ungenayo i-coriander ungavele usebenzise iparsley)
Isipuni se utamatisi ogxilile (kuyakhetheka)
Letha ithegi ukumamatheka ne amafutha e-olive ukuze ifudumale ngenkathi isika i- anyanisi kuJulienne. Uma uwoyela ushisa, engeza u-anyanisi. Imvamisa u-anyanisi udayiwe, kepha namuhla bekuyisikhathi sokuwufihla, ngakho-ke bekufanele ngiwufake nge-blender.
Uma ukhetha ukukwenza ngendlela yendabuko:
Lapho u-anyanisi esevele obala uhhafu engeza i- utamatisi ama-clove ka-garlic aqoshiwe futhi achotshoziwe. Lapho zihlehliswa zengeza ingilazi yamanzi futhi, uma ufisa, isipuni se- utamatisi ogxilile.
Uma kufanele ufihle u-anyanisi onjengami:
Lapho u-anyanisi esobala uhhafu, wedlulise ku-blender kanye ne utamatisi uthathe ama-cubes, amazinyo we i-garlic nengilazi yamanzi. Uma konke sekuchotshoziwe kwengeze ku-tajine.
Sesivele sine-sauce cishe esekulungele futhi ukusuka lapha inqubo iyafana, noma ngabe usebenzise i-mixer noma cha. Faka i- upelepele, the ikhumini, lo sal futhi i pepper. Hlanganisa kahle futhi, lapho usoso uqala ukubilisa, engeza i- iparsley ne-coriander oqoshiwe uphinde uhlanganise.
Ngenkathi ibilisa isikhashana, lungisa inyama egayiwe ngokwenza amabhola osayizi owuthandayo. Ngokwesiko, i-tajine ayiphakwa kupuleti ngalinye noma idliwe ngezinhlamvu, kepha wonke umuntu udla i-tajine ngqo ngezingcezu zesinkwa, ngakho-ke ngincamela ukwenza amabhola amancane ukuze ngesikhathi sokudla kube lula. Lapho usuqede wonke amabhola uwafake kuthegi bese umboza imizuzu emi-5
Guqula ama-meatballs uphinde umboze futhi eminye imizuzu engu-5 ukuqeda ukupheka ngakolunye uhlangothi. Futhi akukho okunye! Usuvele unayo eyakho i-kefta tagine ngomumo.
Ngesikhathi sokukhonza ...
Njengoba ngishilo ngaphambili, i-tajine isetshenziswa njengoba injalo futhi wonke umuntu udla ukusuka lapho (yilowo nalowo ohlangothini lwakhe, kunjalo). Kodwa-ke, amasaladi akhonzwa emapuletini ngamanye nangokusika.
Imvamisa i-kefta tagine nayo ine- iqanda umuntu ngamunye. Uma kunjalo-ke kuzofanele bangezwe emizuzwini engu-5 edlule ukusetha nokufafaza ngayo ikhumini nosawoti, njengoba sikwazi ukubona kulesi sinye isikhathi lapho ngenze khona le tajine:
Abanye abantu bengeza amaqanda ashayiwe esikhundleni samaqanda aphelele, indaba yokunambitha.
Ngizohlala ngikusho njalo: Into enhle ngama-tajines akukhona nje ukupheka kwawo kancane odakeni, kodwa futhi angadliwa ngabantu abaningi ngaphandle kokuthola kamuva intaba yamapuleti nezindawo zokusika ukuze zihlanze. Kuyinzuzo enkulu!.
Jabulela ukudla kwakho futhi ube nempelasonto enhle!
Ama-Kilocalories ngokusebenza ngakunye 340
Nginguchwepheshe wezemfundo yezingane, bengibandakanyeka emhlabeni wokubhala kusukela ngo-2009 futhi ngisanda kuba ngumama. Ngiyazifela ngokupheka, ... Buka iphrofayli>
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » I-Kefta tagine
UVeronica cervera kusho
Ngubani othi kufanele ulinde? Lokhu kumnandi kakhulu futhi kufanele ukwenze kungekudala, hahaha.
Phendula uVeronica Cervera
Ummu Aisha kusho
Ngijabule kakhulu ukuthi uyayithanda. Ngizoqaphela, uma uyilungisa futhi uyishicilela kubhulogi yakho ngizokunikeza inothi hahaha.
Sanibonani futhi ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho